Safiirka Somaliland Ee Imaaraadka Carabta Oo kulan La Yeeshay Amiirka Ras-Al-Khayma Iyo Jaaliyadda Reer Somaliland Ee Degan Halkaas – WARSOOR
Ras-Al-Khayma – (warsoor) – Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta, Amb. Baashe Cawil Cumar, ayaa kulan uu la yeeshay hogaamiyaha mandaqada Ras Al Khaymah HH. Saud bin Saqar kaga wada hadleen iskaashiga u dhexeeya Somaliland, iyo Ras-Al-Khayma.
Kulanka oo ay Safiir Baashe Cawil ku weheliyeen xubno ka tirsan jaaliyada Somalilad ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa amiirka mandaqada Ras al khayma, HH Saud bin Saqar uu ballanqaaday iskaashi dhexmara Somaliland, isla markaana amaanay kaalinta jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan kaga jiraan horumarka dhaqaalaha mandaqada.
Kulanka labada dhinac ayaa lagu soo hadal qaatay wada shaqeyn dhexmarta labada wadan iyo labada shacab, isla markaana waxa loo ballamay in kulamo dambe oo hawlaha lagu sii ambaqaadayo la yeesho.
Dhinaca kale Safiirka Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta ayaa kulan afuro iyo iswaraysi ah la yeeshay jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalkaas .